यस प्रश्नको जवाफ, यसलाई यूरेशिया अन्य महादेशमा को सम्बन्ध मा स्थित छ रूपमा, अनिवार्य विशेषताहरु, र प्राकृतिक क्षेत्रमा त भनिन्छ कि धनी महादेशमा को किसिम को विवरण समावेश र जलवायु हुनेछ।
सबै भन्दा ठूलो महाद्वीप
कारण वास्तवमा गर्न यूरेशिया स्थिति को विशिष्टताको कुनै अन्य महादेशमा आकार मा संग छैन तुलना गर्न सकिन्छ कि, आफ्नो क्षेत्रमा र जैविक विविधता मा बस्ने मान्छे को संख्या।
नाम नै यूरेशिया अन्य महादेशमा को सम्बन्ध मा स्थान अन्त स्पष्ट थियो, यो उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त सम्म यो क्षेत्रमा लागि तय भएको थियो। त्यतिन्जेल, यो एशिया वा एशिया-युरोप भनिन्छ वा थियो। तर seminal काम Eduarda Zyussa को प्रकाशन पछि, शब्द अन्तमा एक भौगोलिक शब्दकोश मा तय भएको थियो।
यसको तट र ठूलो भित्री रिक्त स्थान - शताब्दीयौंको दौडान, अनुसन्धानकर्ताहरूले महाद्वीप अध्ययन गरेका छन्।
ग्रह मा सबै भन्दा ठूलो महाद्वीप रूपमा, यूरेशिया एक भौगोलिक अर्थमा अब अवस्थित महादेशमा पनि कान्छो छ। यो भू-भाग को एक विस्तृत विविधता उत्पन्न जो महत्वपूर्ण भूकम्पीय गतिविधि, गर्न जान्छ।
बाटो यूरेशिया अन्य महादेशमा, परिभाषित स्ट्रेट्स र यसको क्षेत्र अलग पहाड दायरा को सम्बन्ध मा स्थित छ। यो महादेशमा मा जस्तै आल्प्स, को हिमालय, को काकेशस, तिब्बत र Pamir, हिन्दु Kush र यूराल जस्ता ठूलो पहाड दायरा छन्। को यूराल पहाडमा र काकेशस संसारको दुई भागहरु बीच सीमाना निशान - युरोप र एशिया।
छिमेकी महादेशमा को अन्त्य
यूरेशिया को महाद्वीप को भौगोलिक स्थान यसको चरम अंक गर्न सकिन्छ। यूरेशिया उत्तर अमेरिका आदर स्थिति रूस को क्षेत्र मा स्थित छ जो महादेशमा, पूर्वी बिन्दुमा निर्धारण गर्न सजिलो छ। केप Dezhnev आर्कटिक र प्रशान्त को सीमा मा स्थित छ र अलास्का देखि,, संयुक्त राज्य अमेरिका पर्छ, को Bering Strait द्वारा विभाजित जो छ वेल्स को केप राजकुमार विपरीत बैंक मा उत्तर अमेरिका को एक चरम विन्दु हो।
यूरेशिया को दक्षिण मा कन्टिनेन्टल बिन्दुमा मानिन्छ एक केप Tanjung Piai, मलेशिया को क्षेत्र मा स्थित। यूरेशिया को बाँझो र उजाड उत्तरी headlands गर्न यसको विपरीत, Tanjung Piai एक लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य हो। यसको क्षेत्र मा स्थित रेस्टुरेन्ट को आराम देखि, vacationers, सिंगापुर मा देख्न सक्नुहुन्छ Johor Strait को विपरीत बैंक मा स्थित। को केप को धेरै किनारा मा pyatnadtsatimetrovy बिकन संकेत पठाउँछ हरेक तीन सेकेन्ड र तट साथ, mangroves विशेष अन्तरराष्ट्रिय अधिवेशनहरूमा, संरक्षित आफ्नो निष्ठा हस्ताक्षर भएको थियो भनेर अद्वितीय बढ्न छ।
यूरेशिया अष्ट्रेलिया भौगोलिक स्थिति सापेक्ष निर्धारण को चरम दक्षिणी बिन्दु। तिनीहरूलाई को एक, दक्षिण द्वीप मानिन्छ छ कोकोस द्वीप को समूह पर्छ। को यूरेशियन आबद्ध द्वीप को भूवैज्ञानिक अर्थमा भन्ने तथ्यलाई तापनि तिनीहरू, तैपनि, अष्ट्रेलिया र यसको बाह्य क्षेत्रहरूमा छन् व्यवस्थित।
यूरेशिया अन्य महादेशमा को सम्बन्ध मा स्थित छ रूपमा: अफ्रीका
लामो समय को लागि, वैज्ञानिकहरू एशिया र अफ्रिका बीचको सीमा खेल्छ जो लाइन, निर्धारण गर्न सकेन। कठिनाइको यो यूरेशिया अन्य महादेशमा यस्ता पहाड दायरा वा स्ट्रेट्स रूपमा प्राकृतिक बाधाओं द्वारा ज्यादातर परिभाषित को सम्बन्ध मा स्थित छ भन्ने तथ्यलाई कारण थिए। यूरेशिया र अफ्रीका बीच यस्तो सीमाहरु अवस्थित छैन, र मरुभूमि चालै नपाई अर्को मा बग्छ।
स्थिति लाल समुद्र पहिलो परीक्षण देखि स्वेज नहर भूमध्य मा भयो जब 1896 मा मौलिक परिवर्तन भयो। दुई महादेशमा बीच सीमा जो पनि दुई समुद्र जडान च्यानल, सेवा भएकोले।
को यूरेशिया र अफ्रीका बीचको अर्को सीमा मोरक्को देखि युरोप अलग भनेर Gibraltarskmu पानीको साघुरो भाग, अफ्रीका को उत्तर मा स्थित मार्फत बित्दै।
अन्य cartilaginous माछाहरू देखि फरक के छ? cartilaginous माछा को वर्ग: विवरण, उदाहरणहरू
पृष्ठभूमि डिजाइन: उदाहरण। निर्माण संग परिचयात्मक वाक्य
5 औं ग्रेड मा के वस्तुहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ?
जिगर को सानो ट्युमर: कारण, लक्षण, उपचार
वजन लागि व्यायाम। एरोविक्स प्लस बल प्रशिक्षण - सफलता आफ्नो गोप्य
Primrose बगैचा। सजावट वसन्त बगैचा
अन्ना Aglatova - जीवनी र काम
टेलिफोन को आविष्कार - सभ्यता लागि एक महत्वपूर्ण घटना
तुलसी Lykshin। सफल बाटो अवरोध शोकमा